သင်၏နေသည်သင်၏လကိုквадратသောအခါဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ - ရင်ပြင်
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - နေရောင်တစ်ခြမ်းစတုရန်းမိုင်
နေနှင့်လအကြားရှိစတုရန်းသည်သင်္ကေတဖြစ်သည်သင်၏စစ်မှန်တဲ့အတွင်းပိုင်း (နေ) အကြားပconflictိပက္ခဖြစ်, သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းသင်ပုံသဏ္andာန်နှင့်ယုံကြည်ချက်များ (ယခုလသည်စစ်မှန်သောအရာ) ကိုကောက်ယူလိုက်သည်။ ...
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤအရာကိုစဉ်းစားကြသည်။ တစ်နေ့သာနေထွက်သွားလျှင်ကော။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်နေကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားကြသည်။ နေသာတဲ့နေ့တွေမှာငါတို့အရမ်းပူတယ်ဆိုပြီးညည်းညူတယ်။ ရက်အနည်းငယ်မိုးရွာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောလောင်ကျွမ်းနေသောဓာတ်ငွေ့ဟောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လွတ်သည်။ သို့သော်နေကရုတ်တရက်ထွန်းလင်းတောက်သွားလျှင်ဘာဖြစ်မည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးသလော။ ကောင်းပြီ၊ သင့်စိတ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောပထမဆုံးအရာသည်၎င်းသည်မဲမှောင်ခြင်းနှင့်အအေးများလာခြင်း၊ မှန်ကန်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မည်သည့်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဖြစ်မည်ကိုပင်ဖော်ပြမထားပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာလူသားတွေဟာကျတော့မယ့်ဘေးဆိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရလိမ့်မယ်။ ဒီဟာကိုတောက်ပတဲ့ဘက်လို့ခေါ်ရတာဝမ်းသာပါသလား။ အချို့သိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်ကောင်းလိမ့်မယ်ယုံကြည်သောအရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏လက်နှိပ်ဓာတ်မီးများကိုထုတ်ယူပါ။
နေပူလောင်လာသည်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိသက်ရှိများသည်ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နေရောင်ခြည်သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားနေပြီးတစ် ဦး တစ်ယောက်ကပစ်ထားလိုက်သကဲ့သို့မိနစ်ရှစ်ခွဲခွဲပြီးနောက်ကောင်းကင်မှောင်မိုက်သွားသည်။ switch! Anet အမှောင်ထုထဲကျသွားတယ်။ ပန်းခြံတွင်ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပနေသောမိသားစုများ၊ ပူပြင်းသည့်နေရောင်ခြည်တွင်သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေရှိသူများ၊ မွန်းတည့်သောလမ်းလျှောက်နေသူမည်သူမဆိုသည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေအခုညဥ့်ရဲ့သေခြင်းပဲ၊ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်။
ပြီးတော့လရောင်ကိုမေ့လိုက်ပါ၊ လကိုယခုမမြင်နိုင်သောကြောင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ရန်နေရောင်ခြည်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နေ၊ လမဟုတ်၊ ယခုတွင်သင်မြင်တွေ့ရသမျှမှာသန်းပေါင်းများစွာသောကြယ်များသည်ကောင်းကင်၌ထွန်းလင်းနေသောကြောင့်နေမှလာသည့်အလင်းတန်းများသည်သူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏နာရီကိုကြည့်နေစဉ်၊ ညနေ ၃ နာရီ၊ နေ့လည်ခင်းတွင်ကြယ်များနှင့်ပြည့်နေသည့်ညကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ionosphere နှင့်ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းရှိနေဝင်ချိန်များနှင့်အနှောင့်အယှက်များပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အမှောင်ထု၏မျက်နှာကျက်မှုသည် Aurora borealis (သို့) မြောက်ပိုင်းအလင်းများကြောင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယခုအချိန်အထိအခြားဂြိုလ်များကိုကောင်းကင်၌မြင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျူပီတာကိုအသုံးပြုနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နာရီခန့်ကြာအောင်ကြည့်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျန်ရှိနေသေးသောနေရောင်ခြည်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂျူပီတာကိုထားခဲ့ပြီးကမ္ဘာသို့ပြန်သွားပါ တစ်နာရီအကြာတွင်လူတိုင်းသည်မိမိတို့၏အခြေအနေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ လူတို့သည်အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုကိုခံစားရန်အခြေချနေထိုင်ကြသည်။ n'ja, ထိတ်လန့်ခြင်းကကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်နေ့ခင်းဘက်ဖြစ်သင့်သောဘက်တွင်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်စိတ္တဇနာရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ လူတွေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းနည်းနေကြတယ်၊ ဒါကြောင့်သဘာဝနေရောင်ခြည်ဟာစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီမရှိရင်လူတွေစိတ်ကျဝေဒနာကိုနက်ရှိုင်းစေတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အေးဆေးအေးဆေးရောင်းရန်ပိုက်ဆံရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်သတင်းကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ၌ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအချို့ရှိသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်များယခုပေါရာဏဖြစ်ကြသည်။
သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆက်လက်လည်ပတ်နေပြီးလျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သွားသည်အထိမြို့ကြီးများသည် ဆက်လက်၍ လင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းအပူချိန်သည်ဒီဂရီများစွာကျဆင်းနေပြီးဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏မျက်နှာပြင်ကိုအပူပေးရန်နေရောင်ခြည်မရှိပါ။ သို့သော်ကမ္ဘာမြေ၏အရည်ပျော်နေသောအူတိုင်သည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်း မှနေ၍ အပူပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်သည်အနည်းဆုံးပထမ ၂၄ နာရီအတွင်းအပူချိန်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ရက်ပြီးသွားပြီ၊ နေမပြန်သေးဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အပြုသဘောဘက်သို့မရောက်နိုင်ပါကကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အာဏာပိုင်များသည်အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီးအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။
လုယက်ခြင်းနှင့်ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းသည်လူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအစားထိုးသည်။ ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကြောင့်သာမကအမှောင်ထုထဲတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်ခံရခြင်းကပိုမိုလုံခြုံသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိုကောင်လေး အဆိုးဆုံးအရာတစ်ခုမှာ photosynthesis သည်၎င်းတို့ကို ၂၄ နာရီလုံးလုံးရပ်တန့်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အပင်များသည်ရေ၊ အာဟာရများ၊ အလင်းနှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့ကိုစုပ်ယူပြီးအောက်စီဂျင်ကိုထုတ်လုပ်သည်။
မကြာမီကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိသတ္တဝါတိုင်းတွင်အောက်စီဂျင်လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့်အခက်အခဲများစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဤစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအချို့ကိုရောင်းရန်အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လာမည့်ရက်အနည်းငယ်တွင်အပူချိန် ၃၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကျဆင်းလိမ့်မည်။
ယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ၄၁ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အပူကိုမှီခိုသောသေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများနှင့်အပင်များကိုမျိုးသုဉ်းစေသည်။ တစ်ပါတ်အတွင်းမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ရှိပျမ်းမျှအပူချိန်သည်သုညအောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
ယခုတွင်သင်သည် '' ဟုတ်တယ်၊ လူများစွာသည်ဆောင်းရာသီတွင် ပို၍ အေးသောဒေသများတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဆိုလိုတာကဆိုက်ဘေးရီးယား။ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကအပူချိန်ဆက်လက်ကျဆင်းနေတာပါပဲ။
အပင်အများစုသည်ချမ်းအေးပြီးနွေးထွေးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောတိရိစ္ဆာန်များမှမကြာမီတွင်မှေးမှိန်လာသည်။ အကြှနျုပျ၏, ထိုမှောင်မိုက်နတ်သမီးပုံပြင်မဟုတ်လော Herbivores များသည်သူတို့၏အစားအစာရင်းမြစ်များပျောက်ကွယ်သွားသောကြောင့်ပထမဆုံးခရီးထွက်ခဲ့သည်။ အသားစားသောသူဖြစ်သင့်! မီလီမီတာ! * tsk * စာကျက်သူများသည်အအေးမိခြင်းများမကုန်မချင်းအသေကောင်များကိုစားသုံးကြလိမ့်မည်။
ဒီမှာဘယ်သူမှအနိုင်ရသူမဟုတ်ဘူး။ သစ်ပင်ကြီးများသည်သကြားသိုလှောင်ခန်းများနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုများကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကြာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ လူများသည်အမိုးအကာများဆောက်လုပ်ပြီးအအေးနှင့်အစာခေါင်းပါးမှုကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားကြသည်။
အိုက်စလန်ကဲ့သို့သောဘူမိအပူစွမ်းအင်လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသောနေရာများတွင်သင်ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်သည်။ ရှင်သန်ရန်နောက်ထပ်နည်းတစ်နည်းမှာနက်ရှိုင်းသောမြေအောက်သွားခြင်း၊ ကမ္ဘာ၏အတွင်းပိုင်းအပူသည်ပိုမိုပြင်းထန်။ သီးခြား igloos နှင့်နှင်းခဲများကိုထိရောက်စွာတိုက်ဖျက်သောအမိုးခုံးပုံသဏ္structuresာန်များရှိရာတစ်နှစ်မျှအကြာတွင်အလွန်ကံဆိုးသည့်နှစ်ပတ်လည်ပြီးနောက်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင် 100 ဒီဂရီသုညအောက်တွင်ရှိသကဲ့သို့အအေး! ဤအချိန်တွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အေးသောအပူချိန်၌ပင်ရှင်သန်နိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားအချို့ကိုသိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ သို့သော်အခြားမျက်နှာပြင်သက်ရှိပုံစံများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။
ပင်လယ်နှင့်သမုဒ္ဒရာ၏အမြင့်ဆုံးအလွှာများကိုယခုအချိန်တွင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ အတွင်းပိုင်းအရည်ကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားသောအချိန်၌အေးခဲသွားစေသည်။ အကယ်၍ လူသားများသည်ဤအချက်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါကကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ပူပြင်းလှသောဗဟိုမှအပူကိုထုတ်လွှတ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဘူမိအပူစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များအနီးရှိသမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်တွင်တစ်ခုတည်းသာအခွင့်အရေးရှိသည်။ သို့သော်မျက်နှာပြင်အပူချိန်သုညအောက်လေးရာဒီဂရီသို့ကျသွားသောအခါသမုဒ္ဒရာပင်နောက်ဆုံးတွင်အေးခဲသွားသည်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာသက်ရှိမရှိဘူးဆိုတာကိုခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ သို့သော်ကမ္ဘာမြေကြီးမည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း။ တစ်ချက်အနေနှင့်၊ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့်သင်နောက်ဆုံးတွင်နယူးယောက်မြို့၊ လန်ဒန်နှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတို့တွင်နေထိုင်ရန်တတ်နိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းအသက်ရှင်နေရင် ...
ကမ္ဘာမြေသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နာရီမိုင် ၆၇၀၀၀ မိုင်နှုန်းဖြင့်နေကိုလှည့်ပတ်နေသည်။ သို့သော်နေပူသည်လောင်ကျွမ်းသွားသောအခါ၎င်း၏မြေထုဆွဲအားသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးဂြိုလ်များကိုသူတို့၏ပတ်လမ်းတွင်မထားတော့ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကမ္ဘာသည်တူညီသောအမြန်နှုန်းဖြင့်အာကာသသို့သွားသည်။ ဤအရာကိုပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်ကျောက်တုံးငယ်တခုကိုကြိုးပေါ်တွင်ချည်ထားပြီးသင်၏ခေါင်းပေါ်ရှိစက်ဝိုင်းတစ်ခုတွင်လှည့်နေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သငျသညျကိုလွှတ်လိုက်သည့်အခါ, ကျောက်သည်သင့်ထံမှမျဉ်းဖြောင့်ဖြင့်ပျံသန်းသွားပြီးထောင့်ရှိကလေးကိုထိမိနိုင်သည်။ Ouch! ဒါကြောင့်ဒီကြိုးဟာကမ္ဘာကိုသူ့ရဲ့ပတ်လမ်းမှာထိန်းထားနိုင်တဲ့မြေထုဆွဲအားနဲ့တူတယ်။ ဒီအင်အားမရှိရင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။
သို့သော်မြေထုဆွဲအားကြောင့်နှေးကွေး။ မြေသို့ကျသွားသောကျောက်နှင့်မတူဘဲအာကာသလေထုထဲတွင်ကမ္ဘာသည်ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားသို့မဟုတ်အခြားကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်နာရီလျှင်တစ်နာရီမိုင် ၆၇၀၀၀ မြန်နှုန်းဖြင့်ဆက်လက်ရွေ့လျားသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဘယ်မှာအဆုံးသတ်မှာလဲ။ နှစ်ပေါင်း ၄၃၀၀၀ ခန့်ကြာပြီးနောက်ကမ္ဘာမြေသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အနီးဆုံးကြယ်ဖြစ်သော Alpha Centauri သို့နီးကပ်လာလိမ့်မည်။ အနှစ် ၁ ဘီလီယံတွင်၎င်းသည်နဂါးငွေ့တန်း၏အရှည်တစ်ခုလုံးဖြစ်သောအလင်းနှစ် ၁၀၀၀၀၀ ကိုဖြတ်ကျော်သွားလိမ့်မည်။ (မင်းသိတယ်)
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်တွင်းနက်ထဲဆွဲသွင်းနိုင်တယ်။ ပြီးနောက်၊ Milky Way တစ်ခုတည်းတွင်တွင်းနက်ပေါင်းဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်၎င်းသည်နေရောင်ခြည်အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၎င်း၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ နေလုံးသည်အလုပ်မလုပ်တော့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အနာဂတ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအာကာသဆိုင်ရာစွန့်စားမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးစီးနင်းဖို့အတွက်အဲဒီနေရာမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ အင်း၊ သို့သော်ဤဇာတ်လမ်းသည် 'အကယ်၍သာ လျှင်' ဟူသောစကားလုံးတစ်လုံးမျှသာဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ ကမ္ဘာ၏စစ်မှန်သောအနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်နေနှင့်“ ခိုင်မြဲစွာဆက်နွယ်နေ” လိမ့်မည်။
နှစ်ပေါင်းဘီလီယံချီ။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသောကြယ်သည်အရွယ်အစားကြီးလာပြီးredရာမအနီရောင်သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မာကျူရီ၊ ဗီးနပ်စ်၊ ကမ္ဘာနှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်တို့ကိုလောင်လိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်းငါးဘီလီယံကြာပြီးနောက်နေသည်၎င်း၏အပေါ်ယံအလွှာကိုသုတ်သင်ပစ်လိုက်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေကိုအဖြူရောင်ထောင်ပြီးအသွင်ပြောင်းသွားစေမည့်အလွန်သေးငယ်သောသိပ်သည်းသည့်အမာခံတစ်ခုသာကျန်ရှိတော့သည်။
ဒါကနောက်မှအလုပ်ကိုရှုထောင့်သို့ထည့်လိုက်သည်မဟုတ်လား။ နေရောင်ရုတ်တရက်ထွက်လာရင်မင်းအတွက်အခက်ခဲဆုံးကဘာလဲ။ အဆိုပါမှောင်မိုက်, အအေးသို့မဟုတ်မသိသော၏ကြောက်ရွံ့ခြင်း? ငါ့ကိုလား ကောက်ပဲပေါင်မုန့်ကောင်းကောင်းရဖို့သိပ်ခက်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ဖော်ပြပါထင်မြင်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပြီးဘယ်သောအခါမှရှာစရာမလိုပါ။ သင်၏မျက်လုံးပွင့်လင်းသောဤဆောင်းပါးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးနှင့်မျှဝေပြီးသင်သဘောကျနှစ်သက်သည့်အချိန်တွင် Like ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းတွင်အလွန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဆောင်းပါးများစွာရှိနေသေးသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။
ဒါကြောင့်အနီရောင် subscribe ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ သင်တောက်ပတဲ့ဘဝရဲ့အသစ်တစ်ခုကိုမလွတ်သွားပါစေ။
Sun Square Moon မကောင်းဘူးလား
နေစတုရန်းမွန်းnatal သည်နက္ခတ်ဗေဒင်တွင်အခက်ခဲဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်သင်၏ထွန်းလင်းရန်လိုအပ်မှုသည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုလိုအပ်ချက်နှင့်အမြဲဆန့်ကျင်နေပါသည်။အနုတ်စိတ်ခံစားမှုများထ။ သင့်အတ္တမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်။ ဤအရာသည်သင့်ကိုစိတ်တိုစေနိုင်သည်။၂ ။ ၂၀၁၄
သင်ဟာနံနက်ခင်းလူတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်လပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်အာကာသထဲမှာနေထိုင်ရတာကိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။ 'အောက်စီဂျင်ကင်းမဲ့' သည့်အရာအပြင် '24 /7night ကောင်းကင် 'သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ် - ငါတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအလင်းအများကြီးရှိတာဘာကြောင့်လဲ၊ ကမ္ဘာမြေသည်၎င်း၏ဝင်ရိုးပေါ်တွင်လှည့ ်၍ နေ၏အကြောင်းအရင်းနှစ်ခုလုံး၏အလင်းရောင်ကိုထွန်းလင်းနေသောကြောင့်၎င်းသည်နေ့အချိန်၌အလင်းရောင်နှင့်ညအချိန်တွင်မှောင်မိုက်နေသည်ဟုသင်ထင်ပေမည်။
ဆိုလိုတာကတော့ငါတို့ကြယ်ကလပေါ်မှာလည်းထွန်းလင်းတောက်ပတယ်၊ အရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေကိုဝန်းရံနေသောထူးခြားသည့်လေထုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းတွင်ဖုန်မှုန့်များ၊ ဖုန်များ၊ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ရေစက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်သေးငယ်သောကြေးမုံကဲ့သို့ပြုမူပြီးနေရောင်ခြည်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ နေရောင်ခြည်သည်ဤသေးငယ်သောအမှုန်များသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ပျံ့နှံ့ကာကွဲပြားသောအရောင်များကိုဖန်တီးပေးသည်။
သင်လပေါ်ရှိနေစဉ်၊ လေထုမရှိလျှင်ကောင်းကင်သည်မှောင်မိုက်နေသည်။ နေလမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နေပူနေသည့်အချိန်၌ပင်ကြယ်များကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အာကာသနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အလားတူပင်။
၎င်းသည်မတူညီသောဓာတ်ငွေ့များနှင့်ပြည့်နှက်သော်လည်းအလင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောမော်လီကျူးများနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်မရှိပါ။ တနည်းအားဖြင့်အာကာသဗလာ။ ထို့ကြောင့်နေသည်ထွန်းလင်းတောက်ပသည့်တိုင်အာကာသသည်အနက်ရောင်ပျက်ပြယ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။
တစ်နေ့လျှင်ကမ္ဘာ့လေထုသည်ပျောက်ကွယ်သွားပါက၎င်းသည်အာကာသသို့မဟုတ်လ၌ရှိသကဲ့သို့အမှောင်ထုကျလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရှင်းပါသည်။ သို့သော်စကြာ ၀ Inာတွင်နေသည်တစ်ခုတည်းသောကြယ် (သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောအလင်းအရင်းအမြစ်!) မဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ - ဘာဖြစ်လို့အခြားကြယ်များသည်ညအချိန်၌လင်းလင်းလင်းလင်းလင်းရောင်ခြည်ကိုမတောက်ပကြသနည်း။ အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစားရန်ပထမ ဦး ဆုံး။
သောမတ်စ် Digges အမည်ရှိနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်သည် ၁၆ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ဤမေးခွန်းကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ Digges သည်စကြာ ၀ endာ၌အဆုံးမရှိ၊ ၎င်းတွင်ရှိသောကြယ်များကိုရေတွက်။ မရနိုင်ကြောင်းသေချာသည်။ သူကဒီများပြားလှတဲ့ကြယ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အလင်းရောင်မပေးချင်ပေမယ့်မအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူဖြေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
သူ၏မေးခွန်းများသည်သူ့အချိန်မတိုင်မီလောက်သာရှိသေးသည်၊ အဖြေရရန်သူ၌ကိရိယာများမရှိပါ။ ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ဂျာမန်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Wilhelm Olbers ကညအချိန်တွင်ကောင်းကင်သည်မှောင်မိုက်နေခြင်းမှာဖုန်မှုန့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ပြီးကြယ်အများစုကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှဖုံးကွယ်ထားသည်။ ထိုအယူအဆသည်နောက်ပိုင်းတွင်အလင်းရောင်သာမကဘဲဖုန်မှုန့်အမှုန်များကိုအပူများစေသည့်ကြီးမားသောစွမ်းအင်အဖြစ်မှားယွင်းခဲ့သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်စတင်တောက်ပလာသည်။
ဤအမှု၌ညကောင်းကင်ယံသည်တောက်ပနေသောဖုန်မှုန့်ကြောင့်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းနေဝင်ချိန်တိုင်းညနေခင်းတိုင်းတွင်ကောင်းကင်သည်မှောင်မိုက်သွားသည်။ အဲဒီသီအိုရီကဘာလဲ? Digges၊ Olbers နှင့်အခြားနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည်စကြာ ၀ universeာသည်အတိုင်းအဆမဲ့ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သော်လည်းခေတ်သစ်နက္ခတ္တဗေဒပညာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာကိုသိသည်။ သို့သော်မရေမတွက်နိုင်သောကြယ်အရေအတွက်သည်ညအချိန်တွင်ကောင်းကင်ကိုထွန်းလင်းရန်မလုံလောက်ပါ။
အကြောင်းမှာကြယ်များသည်စကြာ ၀ itselfာကဲ့သို့ပင်ထာဝရတည်မြဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မင်းကအကန့်အသတ်ရှိတယ် ကြည့်ရတာစကြဝtheာမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေထင်ထားသလိုမဟောင်းပါဘူး။
သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့လူသားတွေအတွက် whippersnappers တွေဟာနှစ်ပေါင်း ၁၄ ဘီလီယံပဲရှိသေးတယ်၊ ထို့အပြင်အဝေးဆုံးကြယ်များမှအလင်းအားလုံးကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိနိုင်လျှင်၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်စီအင်အားကြီးသောအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အဝေးဆုံးကြယ်မှကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာအလင်းရောက်ရှိရန်လိုကြောင်းယခုကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဝေးကွာသောအတိတ်ကိုကြည့်နေကြသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်အလင်းသည်ကမ္ဘာမြေသို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံကစတင်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြနိုင်သည်။ ပိုအစွမ်းထက်သောအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းသည်အချိန်ကြာကြာကြည့်နိုင်သည်။ တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြယ်များမပေါ်မီကတည်ရှိခဲ့သောအရာတစ်ခုကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းတို့အကြားမှောင်မိုက်သောကွာဟချက်များကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်ဤနေရာတွင်ခဏ၌ထိုအကြောင်းပို! အိုကေ၊ ကြယ်တွေကငါတို့ညကောင်းကင်ယံကိုသိပ်မလန်းကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတကယ်အိုမင်းလာပြီ၊ ငါတို့သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တောင်မှသူတို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဝေးဝေးပါပဲ။ သို့ဖြစ်လျှင်ကြယ်များသည်အဝေးမှကြယ်ကဲ့သို့နေရောင်ကဲ့သို့ထွန်းလင်းတောက်ပနေခြင်းမဟုတ်ပါလား။ သောင်းနှင့်ချီသောကြယ်များသည်စကြာ ၀ ofာ၏အစွန်းရှိကြယ်များထက်များစွာပိုမိုနီးကပ်စွာရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆုံးအာကာသအိမ်နီးချင်း Proxima Centauri ကိုကြည့်ရအောင်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကျောခြံတွင်လက်တွေ့ကျပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံမှအလင်းလေးနှစ်ကျော်လွန်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းမပါဘဲကောင်းကင်၌ပင်ထိုအရာကိုမမြင်နိုင်ပါ။ ဒါကငါတို့နေထက် ၇ ဆပိုသေးပြီးနေရဲ့တောက်ပမှုရဲ့ ၁% ကိုသာထုတ်လွှတ်ပေးတယ်။ ၄ နှစ်အကွာတွင်သာရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးသောအိမ်နီးချင်းမှာ ၂၅ ထရီလီယံမဝေးသေးပါ။
နှိုင်းယှဉ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောတောက်ပသောနေသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်မိုင် ၉၃ သန်းသာဝေးသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကြယ်ဟာပိုကြီးပြီးပိုနီးတယ်။ အခြားကြယ်များသည်နေထက် ပို၍ တောက်ပနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်များစွာဝေးကွာကြသည်။
သို့သော်ဤအဝေးမှကြယ်အားလုံးသည်အနည်းဆုံးဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သိသာသောအလင်းကိုပေးသည်မဟုတ်လော။ ငါပြောလိုက်သည်မှာ၎င်းသည်ကြီးမားသော LED မီးလုံးများကဲ့သို့တောက်ပမှုမရှိသော်လည်းသေးငယ်သော halogen lightbulbs တစည်းကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်တူသည်၊ သို့သော်သူတို့၏အလင်းအချို့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကငါတို့ကိုနည်းနည်းလောက်ပေးတယ်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့လေထုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအချည်းနှီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထွက်ရှိသည့်ဓာတ်ငွေ့များစွာရှိသည်။
သူတို့သည်ရွေ့လျားကာတိမ်များဖွဲ့စည်းကာနဂါးငွေ့တန်းရှိအလင်းအများစုကိုဖုံးကွယ်ထားသောကုလားကာအနေဖြင့်ပြုမူကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးငွေ့တန်း၌ဖြစ်ပျက်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထူးကိရိယာများလိုအပ်သည်။ သို့သော် Olbers သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်မှန်ကန်ကြောင်း၊ အလင်းဖုံးအုပ်ထားသောကုလားကာသည်ဖုန်မှမဟုတ်ဘဲဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်! - ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုပြဇာတ်သို့ကြွလာရှိရာ။
သီအိုရီအရစကြာ ၀ universeာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၃.၈ ဘီလီယံက Big Bang တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းကအရာရာတိုင်းသည်အစပြုခဲ့သည့်အချိန်ကာလမှရွေ့သွားခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာစကြာ ၀ andingာသည်ကျယ်ပြန့်လာပြီး၎င်းအတွင်းရှိအရာဝတ္ထုများသည်အချိန်နှင့်အမျှတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဝေးကွာသွားသည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်များလည်းရွေ့လျားနေပြီးကျယ်ပြန့်စွာရွေ့လျားနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနေရာများမှောင်မိုက်လာပြီးအနက်ရောင်areasရိယာအရေအတွက်များလာနေသည်။ ၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ မိမိတို့၏အမြန်နှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားနေခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တယ်လီစကုပ်များနှင့်ဂြိုဟ်တုများသည်၎င်းတို့ကဲ့သို့ပင်စမတ်ကျသောဤလှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ - ဒီလူမည်းတွေဘယ်လိုသိကြသလဲ။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တွေကသူတို့ကိုမမြင်နိုင်ရင်တောင်နယ်မြေတွေတည်ရှိနေသလား။ ထိုအချိန်ကရိုးရှင်းစေရန်သူတို့သည်မြင်နိုင်သောအရာဝတ္ထုများ၏ပြုမူပုံကိုစစ်ဆေးကြသည်။
ကြယ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ကြယ်တစ်လုံးပတ်လမ်းအတွင်းရွေ့လျားပုံသို့မဟုတ်မြေထုဆွဲအားမည်သို့ရှိသည်။ ၎င်းကိုအမည်မသိအာကာသအရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုအုပ်စုတစ်ခု၏ရှေ့မှောက်တွင်သာရှင်းပြနိုင်သည်။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များကစကြာ ၀ inာအတွင်းရှိအရာများသည်မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လူ့မျက်စိအတွက်အနက်ရောင်ပျက်ခြင်းနှင့်တူသည်ဟုထင်မြင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းမှတစ်ဆင့်မည်သို့သောပုံပေါ်သနည်း။ Oooh, ဤအရာအလုံးစုံအနက်ရောင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရောင်များဖြင့်သက်ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အာရုံသည်မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်စဉ်ကိုကန့်သတ်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ကျောင်းကလျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်စဉ်ကိုသင်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တဲ့အလင်းဟာဒီလှိုင်းအလျားနဲ့ကြိမ်နှုန်းတွေအားလုံးရဲ့သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဆိုတာသင်သိတယ်။ ရေဒီယို၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ x-Ray နှင့် gamma ရောင်ခြည်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်မြင်နိုင်သောရောင်ခြည်ထက်ကျော်လွန်နေသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အာကာသထဲတွင်ရှိပြီးခေတ်မီတယ်လီစကုပ်များဖြင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
အမှောင်သို့မဟုတ်မမြင်ရသော nebulae များသည်စိတ်ကူး။ ရသောအရောင်များအားလုံးတွင်ထွန်းလင်းတောက်ပသည်။ အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် - မည်သည့်ဓာတ်ငွေ့များပေါ်မူတည်ပြီးအရောင်ဘီးတစ်ခုလုံး! တစ်နေ့မှာညကောင်းကင်ယံကိုကြည့်ရုံနဲ့အရောင်အားလုံးရဲ့အရောင်အားလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့အထူးမျက်မှန်တွေရလိမ့်မယ်။ ဟေး၊ ဒီနေ့ဆောင်းပါးအသစ်ကိုသင်လေ့လာပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဝေမျှမယ်ဆိုရင်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားနှစ်သက်မယ်လို့ထင်တဲ့တခြားထူးခြားတဲ့ဆောင်းပါးအချို့ကတော့ဘယ်၊ ညာကိုနှိပ်ပြီးဘဝရဲ့တောက်ပတဲ့ဘ ၀ မှာနေပါ။
Sun Moon ရှုထောင့်ကဘာလဲ။
နေ-လရှုထောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှု၏အဓိက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အတ္တနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဤသည်တွဲဖက်, sextile, trine, စတုရန်းနှင့်အတိုက်အခံတို့ပါဝင်သည်ရှုထောင့်။ ဤစာမျက်နှာကိုဖတ်ပြီးသောအခါ၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလည်းကြည့်ပါနေအိမ်များနှင့်လသင်၏အသက်တာ၏မည်သည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ရှုရန်အိမ်များတွင်လေ့လာပါရှုထောင့်ထဲမှာနေရာယူပါလိမ့်မယ်။
Sadhguru: ငါတို့မွေးခြင်း၏အမှန်တကယ်ဖြစ်စဉ်သည်ဤသံသရာများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ သူတို့သည်အမျိုးသမီးသံသရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးဖွားမှုသည်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကိုသူတို့သိကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တစ်ဆယ့်လေးနေရာမှတစ်ဆယ့်လေးပုံတစ်ပုံမှ ၁၂ ခုအထိလေးဆယ့်လေးပုံတစ်ပုံသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်၏ခုနစ်သံသရာကိုပြီးစီးလျှင် ...
အကယ်၍ သင်သည်နေရောင်ခြည်သုံးစက်ဝန်း ၇ လုံးကိုပြီးစီးပါကတစ်လနှင့်ရှစ်လပြည့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရှစ်ဆယ့်လေးနှစ်နှင့်သုံးလနေလျှင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက်ဘီးခုနစ်လုံးနှင့်လတစ်လရှစ်လပြည့်လိမ့်မည်။ အကယ်၍သာ သင်သည်ထိုရှည်လျားသောအသက်တာကိုသာရှင်သန်နိုင်ပါက (အမှားများ) ကျွန်ုပ်သည်ယခုအမှိုက်များလွန်းခြင်းကိုအားပေးလိမ့်မည်။ (ရယ်မောသံများ) အကယ်၍ သင်သည်နေရောင်ခြည်သုံးစက်ဝန်းနှင့်တစ်လရှစ်လကိုစက်ဘီးကိုဖြတ်သန်း။ စီမံနိုင်လျှင်၊ သင်သည်ကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်။
ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်သင်၏နှောင်ကြိုးမှာအကြီးအကျယ်ပျက်သွားသည်။ အလွယ်တကူအကူအညီအနည်းငယ်သာဖြင့်သင်ဘာမှမသိသော်ငြားလည်းမွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်းသံသရာကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်အကူအညီအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ဂြိုလ်နှင့်သင်၏နှောင်ကြိုး၊ သင်အတွင်း၌သယ်ဆောင်ထားသောမှတ်ဥာဏ်နှင့်သင့်မှတ်ဉာဏ်တို့ကြောင့်သင်နှင့်သင်၏နှောင်ကြိုး၊ သင်ဒီနှောင်ကြိုးကိုချိုးဖျက်လိမ့်မယ်
အဲဒီနှောင်ကြိုးပျက်သွားရင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ လူတွေကကမ္ဘာရဲ့ဆားလို့ပြောရင်လူအများစုနားလည်တာထက်ပိုပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤလောက၏ဆားဖြစ်ကြ၏။
ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အနည်းငယ်ဖုန်လေးပဲ။ ဘာ? မင်းငါ့ကိုငါ့ကိုယ်ငါလို့ခေါ်နေတယ်၊ ​​ထွက်လာပြီးပြန်ကျသွားတဲ့မြေကြီးတစူးလေးပဲ။ ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်မှုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဂြိုဟ်နဲ့မင်းရဲ့ထင်ရှားပေါ်လွင်လာတဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေလို့၊ ဒီနှစ်ခုဟာချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ အလွန်နက်ရှိုင်းတယ်၊ အလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်။
ထိုအချိန်မှစ။ အလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်လာ; အလွန်သေးငယ်သောတွန်းအားပေးနှင့်အတူကအမှုကိုပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်မှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်ခဲ့လျှင်သင်လုပ်ရမှာကသင်ဟာရှစ်ဆယ်လေးနှစ်ကကမ္ဘာကြီးကိုနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း (ရယ်မောခြင်းအနည်းငယ်) နဲ့အဆုံး၌အရေးပါသောရလဒ်သာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါသောအခါငါရှာပါလရှုထောင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂြိုလ်များ (နေ၊ မာကျူရီ၊ ဗီးနပ်စ်နှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်)၊ဆိုလိုသည်မင်းရဲ့ဘ ၀ မှာမင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဟာသိသာထင်ရှားတယ် - သူတို့ဟာမင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ဖြစ်မှုရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သေချာပေမယ့်တစ် ဦး un-aspectedလကျိန်းသေကန့်သတ်လျော့နည်းနှင့်၎င်း၏အလားအလာအစွမ်းသတ္တိဖြည့်ဆည်းဖို့ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။၁၆ ။ 2019 ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကြဝuniverseာကို ဖြတ်၍ ဝေးလံစွာလှည့်လည်သွားလာနိုင်သည်၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမသွားပါက သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုသော်လည်းအနီးကပ်မဟုတ်ပါ။ လူကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လည်ပတ်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လဖြစ်ပြီးစကြဝuniverseာရှိအရာဝတ္ထုအများစုကဲ့သို့နက်နဲသောအရာများနှင့်ထူးဆန်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ ဒီမှာငါတို့လရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပိုင်း ၁၀ ခုရှိတယ်။ နံပါတ် ၁၀ ။
လအပေါ်လူသား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိလိမ့်မည်။ ငါတို့ဟာအရမ်းကိုတက်ကြွတဲ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာနေတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသဘာဝစွမ်းအားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန်အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ကျောက်တုံးများ၊ မီးတောင်များသည်ကျောက်တုံး၊ လေနှင့်ရေထုအသစ်များကိုသိုလှောင်ထားသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သက်ရောက်သော micrometeoroids ကြောင့်တိုက်စားမှုဖြစ်ရခြင်းနှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအထိဆိုလာလေသည်အလွန်နှေးနှေးသောကြောင့်လူ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမဆိုအကန့်အသတ်မရှိဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ Apollo မစ်ရှင်များမှခြေရာခံယူပါ။
လက်ရှိတိုက်စားမှုနှုန်းမှာအနည်းဆုံးနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာရှည်နိုင်သော်လည်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းသန်း ၁၀၀ ကြာနိုင်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်တူသည်။ ပိုမိုကြီးမားသောဥက္ကာခဲတစ်ခုပေါ်လာပြီးဆင်းသက်မည့်နေရာကိုလုံးဝသုတ်သင်ခြင်းမရှိပါကထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လပေါ်မှာအရာဝတ္ထုတစ်မျိုးရှိတယ်။ အမေရိကန်အလံတွေမရှိတော့ဘူး။
နေ၏ပြင်းထန်သောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်ကမ္ဘာမြေကြီးသည်အကာအကွယ်အချို့ရရှိပြီးအရာများသည်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားပြီ ဖြစ်၍ လသည်လုံးဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းနိုင်လွန်အလံများသည်လုံးဝယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီးပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ယခုအချိန်ထိဝင်ရိုးစွန်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှကျန်ရှိနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ နံပါတ် ၉ ။
လသည်အနံ့ရှိသည်။ Apollo ၏မစ်ရှင်များလအတွင်းအာကာသယာဉ်မှူးများသည် moondust ကိုကိုင်တွယ်ရန်မလွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သူတို့သည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ကြိုးစားကြသော်လည်းသူတို့၏ဝတ်စုံများကိုကုန်းပေါ်သို့ပြန်မသွားခင်ချွတ်ပစ်လိုက်ကြပြီး၎င်းတို့နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည့်လွင်ပြင်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါ။ သူတို့မြေပေါ်သို့ပြန်လာပြီးသူတို့၏သံခမောက်များကိုချွတ်လိုက်သောအခါလဖုန်သည်အလွန်ပြင်းထန်စွာအနံ့ဆိုးထွက်သွားသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ အနံ့ဆိုးရွားရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေဆဲဖြစ်သဖြင့်အမှုန့်နှင့်လမှုန့်များသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းမှုများဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ်များသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလေထုမှအိုင်းယွန်းများနှင့်အလွန်ခြောက်သွေ့သောလဖုန်မှုန့်နှင့်အတူအနံ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအစိုဓာတ်နှင့်ထိတွေ့မိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်မည်သည့်လကိုလိုနီအတွက်ပြproblemနာဖြစ်မည်နည်း။ မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည် သို့သော်အခြားရှုထောင့်တစ်ခုရှိသေးသည်။ အာကာသယာဉ်မှူးဂျက်ရှမစ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အနံ့ဆိုးထွက်သည့်အခါဖုန်မှုန့်များနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
နံပါတ် ၈။ လသည်ရေနှင့်မီးပွားများရှိနိုင်သည်။ လ၏မျက်နှာပြင်သည်အလွန်ခြောက်သွေ့သောနေရာဖြစ်သည်။
သဲကန္တာရသည်မည်မျှခြောက်သွားသည်ကိုမဖော်ပြပါ။ ပြင်းထန်သောနေရောင်ခြည်ကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရေဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့လပေါ်မှာနေရောင်ခြည်ဘယ်တော့မှမရောက်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်တိုင်များ၌လခြမ်းရှိလခြမ်းခြမ်းများသည်နေရောင်ခြည်မခံနိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြံပြုခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ထိုတွင်ရေခဲများရှိနေသေးသည်။ ဤသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဟုသက်သေအထောက်အထားများရှိပြီး၊ လပေါ်တွင်လူသားတစ် ဦး ကိုလိုနီတည်ထောင်ရန်မည်သည့်မျှော်လင့်ချက်တွင်မဆိုအရေးကြီးသည်။ ရေသည်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေကြီးပေါ်မှစတင်ရန်စျေးကြီးသည်။
ဒါကြောင့်ကိုလိုနီအတွက်ရေအများကြီးရရှိနိုင်မှုသည်သောက်ခြင်းနှင့်အစားအစာစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သာမကအောက်စီဂျင်နှင့်လောင်စာထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ ဤသည်မှာလကိုလိုနီလုပ်လိုသူများအတွက်ပြproblemနာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤအရာသည်လ၏အရိပ်လွှမ်းမိုးထားသောဒေသများတွင်တွေ့နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။
သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိချက်အရဤဒေသများရှိမြေဆီလွှာသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရည်ပျော်သွားကြောင်းသက်သေပြနေသည်။ micrometeoroids များကထိုးဖောက်ခံရသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုအတွက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မြေကြီးကိုအရည်ပျော်စေမည့်အခြားအရာတစ်ခုရှိသည်။ NASA ၏မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရပြင်းထန်သောနေရောင်ခြည်မုန်တိုင်းများအတွင်းအလွန်အမင်းအေးသောအမြဲတမ်းအရိပ်များရှိသောပိုလာဒေသများတွင်လမျက်နှာပြင်သည်လျှပ်စစ်အားသွင်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤအားသွင်းမှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအားဖြည့်ပြီးမြေထုထည်နှင့်လွင့်မျောနေသည့်အနက်ရောင်အခြေအနေများတွင်လ၏မျက်နှာပြင်ကိုအလွယ်တကူအရည်ပျော်သွားစေနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအလင်းအရင်းအမြစ်များမှာကြယ်များပေါ်၌လေထုနှင့်အလင်းရောင်များမပါရှိသောကြယ်များ၊ ခြေထောက်အောက်မှာမြေပြင်။ နံပါတ် ၇။ ကမ္ဘာသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဂြိုလ်သိပ္ပံတွင်အလွန်နက်နဲသောအရာတခုမှာလကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးရှင်းလင်းချက်သည်သိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကမ္ဘာ့သမိုင်းအစမှာစောလွန်းသဖြင့်၎င်းသည် Proto-Earth ဟုခေါ်ဆိုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Mars အရွယ်အစားသည် Proto ကိုကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ နှင့်အာကာသအတွင်းလဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုပစ္စည်းများကိုမှုတ်။ Theia လို့အမည်ပေးလိုက်တဲ့ဒီအင်္ဂါဂြိုဟ်အရွယ်ရှိအရာဝတ္ထုဟာတိုက်မိရာကနေအတူတကွကြီးထွားလာပြီးလဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံအလောက်ကိုပစ်လွှတ်နိုင်တဲ့ထောင့်တစ်နေရာမှတစ်ဆင့်အလျင်အမြန်ထိုးနှက်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၎င်းကိုနေနှင့်နေအဖွဲ့အစည်း၏အခြားနေရာများတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာဝတ္ထုများနှင့်မကိုက်ညီသောကမ္ဘာနှင့်ပထဝီဝင်အကြားဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတူညီချက်များကကူညီသည်။
သို့သော်၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ဒီရေအတွက်လသည်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများ၏မူလအစတွင်အခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဒီရေကန်များမှာလ၏တည်နေရာဓနဓာတုဗေဒတွင်လသည်မတည်ရှိခဲ့ပါကထို့နောက်ဒီရေအိုင်များမှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
လ၏တည်ရှိမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းလော။ ၎င်းသည်ကျန်စကြာ ၀ ofာနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ပါသလား။ ကမ္ဘာမြေကဲ့သို့သောကမ္ဘာဂြိုဟ်များ၌လများမပါရှိပါက၎င်းတို့သည်သက်ရှိထင်ရှားရှိနိုင်မည်လော။ မသိဘူး သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းနှင့်အသက်ဖန်တီးရန်သဘာဝဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းသည်လကမ္ဘာကြီးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏တည်ရှိမှုအပေါ်မူတည်လျှင်၎င်းသည်မည်မျှမကြာခဏဖြစ်ပျက်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာ Mars သည်အလွန်သေးငယ်သောသက်ဆိုင်မှုမရှိသောလများဖြစ်ပြီးမာကျူရီတွင်ဘာမျှမရှိပါ။ ကမ္ဘာမြေ၏အမြွှာအမွှာဖြစ်သော Venus တွင်ဘာမျှမရှိပါ။ ကြယ်စနစ်များအတွင်းရှိကမ္ဘာဂြိုဟ်များသည်လများကိုမဖွဲ့စည်းနိုင်ပါ။ တစ်ခဏထိုးနှက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်? မေးခွန်း၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ။
အကယ်၍ လသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်တူသောကျွန်ုပ်တို့၏သမုဒ္ဒရာ၏လနှင့်သက်ဆိုင်သောဂြိုလ်များနှင့်ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသာသက်ရောက်ပါကလာမည့်နှစ်များတွင်ဖာမီ Paradox ကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်လမ်းသွားလမ်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာသည်လကိုဒီရေ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မွန်းလွဲ။
Apollo မစ်ရှင်များအတွင်းတွင်အာကာသယာဉ်မှူးများသည်လပေါ်ရှိငလျင်မီတာများပေါ်တွင်ရပ်နေသည်။ ဤအရာသည်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုသိရန်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအချိန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်များမှာ၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမယူနိုင်ခြင်းနှင့်လငလျင်များပုံမှန်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငလျင်ကြီးများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သောသံမဏိပြားများချက်မှာရွေ့လျား cs မရှိပါ။
သို့သော်ငလျင်တိုင်းတာမီတာများသည်လ၏ငလျင်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီးအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများရှိသည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဥက္ကာခဲများ၏သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားအမျိုးအစားတစ်ခုမှာသဘာဝတွင်အပူဖြစ်ပြီးလ၏အပေါ်ယံလွှာသည်ကျုံ့သွားကာနေရောင်ခြည်မရရှိလျှင်၎င်းသည်သေးငယ်သောတုန်ခါမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သို့သော်မြေအောက်ကီလိုမီတာ ၇၀၀ အထိနက်ရှိုင်းသောငလျင်များကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကိုလအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကမ္ဘာ့ရေဒီယိုသတ္တိကြွများကဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်လကိုဆွဲဆောင်သောအခါ၎င်းသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤငလျင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်တွေ့ကြုံရသည့်အရာများထက်သိသိသာသာအားနည်းနေသော်လည်း Apollo မစ်ရှင်များတွေ့ရှိသောနောက်ဆုံးအမျိုးအစားမှာမူရင်းတွင်အနည်းငယ်ပိုမိုဆန်းကြယ်ပြီးအနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ ဤရွေ့ကားရေတိမ်ပိုင်း moonquakes ခဲ့ကြသည်။ ဤပြင်းထန်သောငလျင်များ၏အကြောင်းရင်းသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လမျက်နှာပြင်အောက်ရှိကျောက်တုံးများအတွင်းကျိုးပဲ့နေသောဇုန်များ၌လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်သည်။
လေ့လာမှုအသစ်များနှင့်လ၌မြေငလျင်မီတာများသာဤအားပြင်းသောငလျင်များကိုအလင်းပေးလိမ့်မည်။ နံပါတ် ၅။ လရဲ့အခြားတစ်ဖက်ဟာငါတို့မြင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဘာကြောင့်ကွာခြားတာလဲ။ လသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအမှန်တကယ်ပင်ကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသောမျက်နှာနှင့်အမြဲတွေ့မြင်စေသည်။
၁၉၅၉ ခုနှစ်အထိဆိုဗီယက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါလ၏အခြားဘက်ခြမ်းကိုမည်သူမျှမမြင်တွေ့ခဲ့ပါ။ အခြားတစ်ဖက်မှကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေသည့်အပိုင်းနှင့်ဆင်တူမည်ဟုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာယူဆနိုင်သည်ဟုယခင်ကယူဆခဲ့သည်။ ဤသည်အများဆုံးဆက်ဆက်အမှုမဟုတ်ခဲ့, လ၏အနီးအခြမ်းကိုမှောင်မိုက်သောဒေသများ၌ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းတွင်၎င်းနှင့်လုံးဝနီးပါးမရှိဘဲတောင်ထူထပ်သောနှင့်မီးတောင်ဖုံးလွှမ်းနေသောမျက်နှာပြင်ကိုပြသထားသည်။ ပြီးတော့အမြင်အာရုံနဲ့မတူပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လမျက်နှာပြင်သည်အနီးအနားရှိထက်သိသိသာသာပိုထူကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ဤအကြောင်းပြချက်ကိုမသိရသေးသော်လည်း၎င်းသည်အနီးနှင့်ဝေးကွာသောနှစ်ဖက်အကြားခြားနားချက်များကိုရှင်းပြသည်။ ပါးလွှာသောအရာသည်သက်ရောက်မှုအပြီးလမှထွက်လာသောလူတို့၏ပစ္စည်းအရည်ပျော်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောအပေါ်ယံလွှာသည်အဘယ်ကြောင့်ထူထပ်နေသနည်းဟူသောမေးခွန်းကိုမဖြေနိုင်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာလသည် Theia နှင့်တိုက်မိပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာသော coalescing material သည်လနှစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကြီးမားသောတစ်ခုနှင့်ဆင်တူသောပတ်လမ်းအတွင်းသေးငယ်သည်။ တစ်ချိန်ချိန်သူတို့တိုက်မိခဲ့သော်လည်းကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်ရှိအရာဝတ္ထုကိုနှေးကွေးစွာဖြိုခွဲခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်ပိုမိုထူထပ်သောအပေါ်ယံလွှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်လသည်ထွက်လာသည်။
သို့သော်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါလရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လမျက်နှာပြင်၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွင်းကွဲလွဲမှုများကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ပျက်ကွက်သည်။
တစ် ဦး ကဒုတိယစိတ်ကူးကိုတင်ပြအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Theia နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးနောက်လဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀၀ အထိအလေးအနက်နီးကပ်လာလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာကမ္ဘာနဲ့လနှစ်ခုလုံးဟာအရည်ပျော်ကျတဲ့ဒါမှမဟုတ် semi-molten state မှာရှိနေမှာပါ။
၎င်းတို့မည်မျှနီးကပ်သည်ကို ထောက်၍၊ နှစ် ဦး စလုံးအပေါ်ဒီရေသက်ရောက်မှုသည်ပြင်းထန်လိမ့်မည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းလ၏ဒီရေသော့ခတ်မှုသည်အနီးနားတွင်အလွန်ပူသောမြေကြီးနှင့်အခြားတစ်ဖက်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအေးခဲသွားခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အငွေ့ပြန်နေသောပစ္စည်းများအားလ၏အေးသောအခြားတစ်ဘက်သို့ရွေ့ပြောင်းသွားခြင်း၊ ချုံ့ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းတို့ကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုထူထပ်သောအပေါ်ယံလွှာများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၄ ။
လသည်တစ်ချိန်ကကမ္ဘာနှင့်နီးကပ်စွာနေစဉ်လသည်အာကာသထဲသို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားသည်၊ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းသည်ဘယ်တော့မှရပ်တန့်မသွားနိုင်ပြီးလသည်နှစ်စဉ် ၄ စင်တီမီတာခန့်ပိုမိုဝေးကွာသွားသည်။ ဒါကထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဆီကို ဦး တည်သွားတယ်။ ကောင်းကင်ရဲ့လရဲ့အရွယ်အစားကနေနဲ့တူညီပြီးစုစုပေါင်းနေမှနေကြတ်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Corona အပေါ်လုံးဝနီးပါးရှုမြင်ခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ရှားပါးပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်တွင်မှေးမှိန်သောအလောင်းများသည်အဆန်းမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏လသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး disk ကိုအတိအကျပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းသန်း ၆၀၀ တွင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လကြတ်ခြင်းကိုကမ္ဘာမြေမှသာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ လသည်ဝေးလံစွာရွေ့လျားသွားသည်နှင့်အမျှအရာရာသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်း ၃ ဘီလီယံခန့်တွင်၎င်းသည်ဝေးလံသောကမ္ဘာမြေ၏လည်ပတ်မှုကိုထိန်းညှိတော့မည်မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ ၀ င်ရိုးလမ်းကြောင်းအပေါ်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့အင်္ဂါဂြိုဟ်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ၎င်း၏လကမ္ဘာ Phobos သည်နှစ်ပေါင်းသန်း ၅၀ ခန့်တွင်သာအင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်တိုက်မိလိမ့်မည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုဖျက်ဆီးရန်၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်လွန်းသော်လည်း၊ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုလိုနီများရှိပါကဖြေရှင်းရန်ပြaနာဖြစ်လိမ့်မည်။ ၃ ။
လမရှိရင်ငါတို့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများ၏မူလအစသည်လ၏အခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာဤသည်မှာဘ ၀ သည်သမုဒ္ဒရာဒီရေကန်များမှအစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေသည်အင်တုံ၌စုဆောင်းခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ဘဝ၏အစ၏ဓာတုဗေဒကိုဖြစ်စေသည်။
လသည်ဒီရေများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းတို့မရှိလျှင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများပေါ်ထွက်လာနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ abiotic ဓာတုဗေဒမှဘဝဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အမှန်တကယ်အခြေအနေများကိုကောင်းစွာနားမလည်သဖြင့်ဒီရေများအပြင်အခြားရေကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိသေးသည်။ သက်ရှိတွေပေါ်ထွန်းဖို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်လုံးပတ်လည်လကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ အတွင်းပိုင်းနေအဖွဲ့အစည်းကိုကြည့်ပါ။
ဗီးနပ်စ်တွင်လနှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်မရှိသလောက်နည်းသည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့မှာဘဝမှာအခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အင်္ဂါဂြိုဟ်အရွယ်အစားနှင့်ကျပန်းတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်သာဖြစ်သည်။
မေးခွန်းအများစုတွင်ကြီးမားသောလများသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပေါ်မှုရှိ၊ ကမ္ဘာကဲ့သို့သောဂြိုဟ်ငယ်များသည် exoplanet များနှင့်ရောက်ရှိရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသောသေးငယ်သည့်လများပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာမထူးဆန်းတဲ့စနစ်တစ်ခုမှာနေနေရတာဖြစ်နိုင်တယ်။ Earth-Moon အစီအစဉ်သည်စကြာ ၀ inာတွင်အတော်လေးရှားပါးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းအစီအစဉ်သည်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လျှင်။ ဘဝပေါ်ပေါက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်သက်မဲ့စကြဝuniverseာတွင်နေထိုင်ကြသည်။
သို့သော်၎င်းသည်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့မသိဘူး။ သို့သော်စကြာ ၀ inာရှိသက်ရှိနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာသည်အလွန်နိစ္စထာဝရဖြစ်သည်။ ၂ ။
လ၏အဆုံးထိုကဲ့သို့သောလိမ်များထွက်အဖြစ်လကနေနှေးကွေးကှာပျော်စရာဇာတ်သိမ်းရှိပါတယ်။ လမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်မကျော်လွှားနိုင်သောပြproblemနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၎င်းသည်နေ၏theရာမအနီရောင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဝေးလံသောအနာဂတ်တွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ချဲ့ထွင်နေစဉ်နေ၏ဓာတ်ငွေ့များသည်လကိုဆွဲငင်။ ကမ္ဘာမြေသို့ပြန်ကျသွားလိမ့်မည်။ ချဉ်းကပ်သောအခါ Roche Limit ကိုထိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာလကိုအတူတကွကိုင်တွယ်နေသောမြေထုဆွဲအားများသည်ကမ္ဘာ့ရေဒီယိုများဖြင့်ကျော်လွှားလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာလသည်ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်မတူဘဲလက်စွပ်ဖွဲ့ပြီးကွဲသွားလိမ့်မည်။
သေဆုံးသွားသောကမ္ဘာမြေသည်ယနေ့ကဲ့သို့ပင် Saturn နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တူလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ကြာကြာမခံဘူး ထိုလက်စွပ်သည်မြေကြီးပေါ်သို့ကျလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကမ္ဘာမြေကြီးသည်နေမှလောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မည်။
ဒါမှမဟုတ်လား။ အခြားမော်ဒယ်များကလသည်ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်ဝေးကွာသွားပြီးမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်၊ ထို့နောက်သူ၏ယခင်အိမ်ထောင်ဖက်မပါဘဲသူ၏အထီးကျန်သောထာဝရကိုကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့မဟုတ်ကမ္ဘာမြေနှင့်လကမ္ဘာစနစ်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ tarရာမအနီရောင်အဆင့်သို့asရာမကြယ်ပွင့်များပြန့်ပွားသွားခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းစွာနားမလည်နိုင်သဖြင့်လောင်ကျွမ်းနေသောကမ္ဘာနှင့်လသည်ထိုအသုံးစရိတ်ကိုထာဝရတည်မြဲနေဆဲဖြစ်လိမ့်မည် ယခုဖြစ်ပျက်နေသည့်အတိုင်းအတာသည်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်လှည့်ပတ်နေသောနေ၏ကျန်ရှိနေသောအအေးဖြူထောင်ညှင်းအစက် နံပါတ် (၁) - သက်ရှိများကလကိုလွင့်တင်လိုက်ခြင်းသည်ကြီးမားသောဇီဝသက်ရှိနှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုလှည့်ပတ်နေသည်လကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ဘဝကိုဖော်ထုတ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီယဉ်ကျေးမှုက၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ဆင်းနှင့်အပေါ်တစ် ဦး အလံစိုက်သောအခါအလွန်ထင်ရှားပါတယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများသည်လကိုဆင်းသက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ကောင်းပြီ, လကိုဆင်းသက်ခြင်းနှင့်ပေါ်မှာနေထိုင်ကြသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာနှစ်ခုရှိပါတယ်, လဝေးအဲဒီမှာရှည်လျားဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ခက်ခဲလွန်းပေမယ့်မီတာကဲ့သို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် Lun-based ဥက္ကာပျံများရှိပါတယ်, ဒါ့အပြင်မြေကြီးကနေသယ်ဆောင် panspermia မှတဆင့်ကျောက်ဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လ၏သေးငယ်သောသက်ရှိများသည်ဘဝကိုအချို့ပုံစံမျိုးဖြင့်လသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ Apollo နှင့်အတူခရီးများသည်ဘက်တီးရီးယားများပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အာကာသယာဉ်မှူးများပင်သူတို့၏အူလမ်းကြောင်းထဲတွင်ရှိသည်။
သို့သော်လူသားသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိသတ္တဝါကြီးများသက်ရှိသက်ရှိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ၊ လသို့လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ထက်များစွာကျော်လွန်သွားသောလကို unl ည့်သည်တစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပုံရသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည်ကိုသင်သိပါက၊ သင်ဤလိုအလိုရှိလျှင်ထိုအခြားအာကာသယာဉ်မှူးတစ် ဦး နှင့်သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီးနာရီပေါင်းများစွာစကားပြောနိုင်သည်။ ဒါဟာသစ်ပင်အုပ်စုတစ်စုပါပဲ။
Apollo 14 မစ်ရှင်တွင် Stuart အာကာသယာဉ်မှူးသည် Roosa ၎င်း၏နေရာသေးသေးလေးကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရန်၊ သစ်ပင်များကိုသယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရိုဆာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုတားဆီးရန်အမေရိကန်သစ်တောဌာနနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသစ်တောဝန်ဆောင်မှုကိုချီးမြှင့်လိုခဲ့သည်။ မျိုးစေ့တွေယူလာတာထက်ပိုကောင်းတာကဘာလဲ
သိပ္ပံပညာလည်းရှိတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်နံနက် အချိန်မှစ၍ အစေ့များဒဏ်ခံနိုင်ပြီးအများအားဖြင့်အပင်ပေါက်လာသောအခါမျိုးစေ့များမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည်။ ထိုအခါပျိုးပင်ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်အပင်များကိုခုတ်။ ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးလများ၌သစ်ပင်များစွာရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, မှတ်တမ်းများကိုဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏။ လသစ်ပင်အများစုသည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်ကိုအတိအကျမသိပါ။
လသစ်ပင်များကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာသစ်ပင်များကို ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များကဖြန့်ဖြူးခဲ့တဲ့ အချိန်မှစ၍ ပြားများရှိသည်၊ သို့သော်အချို့သည်မည်သည့်အခါမျှမသိ ခဲ့၍ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရှိနိုင်သည်။ အင်ဒီယားနားရှိကင်းထောက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သော Goddard Space Flight Center တွင်လူသိများသောနမူနာများသည်ကြီးထွားလာသည်။
ထိုအပင်များယေဘုယျအားဖြင့်သက်တမ်းကြာနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စမ်းသပ်မှုကနေ sequoias အချို့ရာစုနှစ်များစွာအသက်ရှင်နိုင်ဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့၏အစေ့ကိုစူးစမ်းလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုတွင်လသို့ပြန်ပို့လိမ့်မည်။
နားထောင်သည့်အတွက်ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်စာရေးဆရာနှင့်အနာဂတ်ပန်းချီဆရာ John Michael Godier ဖြစ်ပြီးဥယျာဉ်ပင်များ၌အရူးဖြစ်၏။ သူတို့ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်တော့မှမဖွံ့ဖြိုးဘူးဆိုရင်ငါတို့မှာဒီပြproblemနာမရှိဘူး။ နည်းပညာ။
ဒါကြောင့်ငါ့ဘဝဟာအခုအချိန်မှာ ဦး နှောက်ကိုကျဆင်းစေတယ်။ မနေ့ကငါဂူနံရံပေါ်မှာမြေအောက်စောင်းတစ်ခု၏ပုံတစ်ပုံကိုခြယ်သပြီးယနေ့ငါပြောင်းဖူးမှုန့်ကြိတ်သော်လည်းကျောက်ခဲကိုမသုံးပါ။ ငါဆဲလ်ဖုန်းဟောင်းကိုအသုံးပြုသည်။
ပြီးတော့အဲဒါမကောင်းဘူး မူလတန်း sucks! အိုနီးလ်ဆလင်ဒါအချိန်! ယခုတွင်ငါသည်စူပါမားကတ်သို့သွားပြီးသင်၏အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်းစာအုပ်ရောင်းသူ၌ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များကိုစစ်ဆေးပြီးကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစကြဝuniverseာ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ ထူးဆန်း။ မသိသောရှုထောင့်များကိုပုံမှန်နက်ရှိုင်းစွာရှာဖွေလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းသို့စာရင်းသွင်းပါ။
Sun Square Ascendant ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
Theနေစတုရန်းTheတက်သည်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအခါသင်သည်မသိဘဲအခြားသူများအားအပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်စေသည်ဟုညွှန်ပြသည်။ လူတွေကိုမင်းကရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောတတ်တဲ့အတွက်မင်းကမှားတဲ့ခြေထောက်ပေါ်ကနေဆင်းလာတတ်တယ်။၂၅ ။ ၂၀၁၄
Moon square Saturn ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဘယ်အချိန်မှာလအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စတုရန်းရာထူးမှSaturn, လူတွေကသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်။ ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစတင်စတင်နေကြသည်။ ဤကာလအတောအတွင်းများစွာသောသူတို့သည်အခြားသူများနှင့်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အခက်တွေ့ကြလိမ့်မည်၊၂ ။ 2020 ။
နေစတုရန်းလရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်လူသိများသည်ဆက်ဆံရေးပိုမိုတင်းမာမှုဆောင်ခဲ့သည်။ င်းရန်လူတွေကပိုပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သည့်ကာလကတစ်ချိန်တည်းကအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အပူတပြင်း။ အချို့မှာဒေါသထွက်လာနိုင်သည်ကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအရင်းနှီးဆုံးလူတွေကအဓိပ်ပါယျမရှိဘဲလုပျကိုငျကွတယျ။၂ ။ 2020 ။
အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာတောက်ပမှုဖြစ်သည်လဘယ်လိုမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်တောက်ပလမွေးဖွားချိန်၌ရှိ၏။ Theလ၎င်းသည်ပြည့် ၀ သောအခါအမြင့်ဆုံးထက်မြက်သည် (ထို့ကြောင့်စွမ်းအား) ရရှိသည်။ Theလအပြည့်အဝကို ၅ ရက်ပတ်လုံးအပြည့်အဝမှတ်ယူသည်လအချိန် (အပြည့်အဝ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိဇယားတွင် ၃၀ ဒီဂရီဖြစ်သည်။ )လ) ။လေး။ ၂၀၁၅
နက္ခတ်ဗေဒင်၏ဒီနေ့သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 2, 2021
ဒီနေ့လ: TheလAries ၌တည်ရှိ၏ဒီနေ့။ ပျက်ပြယ်မရှိပါလကာလဒီနေ့။ Theလဆုတ်နှင့်၎င်း၏ Waning နောက်ဆုံးရပ်ကွက်၌တည်ရှိ၏လအဆင့်။
ဘာကြောင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ညဟာဒီလောက်ကြီးမားလွန်းတာလဲ။
လကြည့်သည်အထူးသဖြင့်ကြီးမားသည်မကြာမီကထပြီးနောက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုထိနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒါကသင့် ဦး နှောက်ကစားနေတဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုရဲ့ရလဒ်ပဲ။ လသည် overhead မြင့်မားသောအချိန်တွင်၎င်းသည်ကောင်းကင်၏ကျယ်ပြန့်သောနေရာမှမှေးမှိန်သွားပြီးကောင်းကင်၌သေးငယ်သော disk တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည်။
လေ့လာသူတစ် ဦး ၏ zenith သို့ရောက်သည့်အချိန်သည်လသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအကြီးဆုံးကြည့်သည်။ ဒါကသာဖြစ်ပွားနိုင်သည်လတ္တီတွဒ် ၂၈.၆၃ ဒီဂရီထက်နိမ့်သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အရွယ်အစားတိုး 2% ထက်နည်းသည်။
သြဂုတ်လ ၆ ရက်၊
အကယ်၍ သင်သည်သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားပါကသင်၏ Zodiac နိမိတ်လက္ခဏာကဘာလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားပါကသင်၏ Zodiac သင်္ကေတသည်လီယိုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မွေးဖွားတဲ့လီယိုတစ်ယောက်အနေနဲ့သင်ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ...
မေလ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောလူများ၏မွေးနေ Horoscope မေ ၁ ရက်မွေးနေ့ horoscope သည်သင်ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးလွတ်လပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းသည်။ သင်တစ်ချိန်တည်းမှာတည်ငြိမ်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်မှုသည်အခြား Taurus 'ထက်ကျော်လွန်နေသည်။
Aprilပြီလ ၁၅ ရက်အတွက် horoscope ဆိုတာဘာလဲ။
နေ့စဉ် Horoscope - 1521 15ပြီလ 2021 အတွက်ယနေ့အခမဲ့ Horoscope | VOGUE India Vogue Daily Horoscope, 21ပြီ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ - ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာများအားလုံးအတွက် Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, ...
ဇန်န ၀ ါရီလ ၂၈ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးစုပ်ခြင်းကားအဘယ်နည်း။
ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင်မွေးဖွားသောသူများ - ရာသီခွင်အမှတ်အသားသည်ရေကူးသမားဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၈ မွေးနေ့ horoscope ကမင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုတန်ဖိုးထားမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဤနေ့ရက်သည်မွေးနေ့ရာသီအမှတ်အသားဖြစ်သော Aquarius ဖြစ်သည်။ ငါးမွေးမြူသူများသည်ငွေနှင့်ဂရုစိုက်ကြသည်။
ဇန်နဝါရီလ 30 ရက်မွေးနေ့ Horoscope
ဇန်န ၀ ါရီလ ၃၀ ရက်အတွက် horoscope ကဘာလဲ။
Scorpio ကောင်းသောနေ့ရက်များပြက္ခဒိန် - ဇွန်
Aquarius Jan'15 Horoscope
မတ်လ 1 မွေးနေ့ Horoscope
အကယ်၍ သင်သည်မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားလာပါကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
အောက်တိုဘာ6မွေးနေ့ Horoscope
အောက်တိုဘာ ၆ ရက်အတွက် horoscope သင်္ကေတကဘာလဲ။
နိုဝင်ဘာလ Horoscopes ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
နိုဝင်ဘာအတွက် horoscope ကဘာလဲ
28ပြီလ 28 မွေးနေ့ Horoscope
Aprilပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
စက်တင်ဘာ 8 မွေးနေ့ Horoscope
စက်တင်ဘာ ၈ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးကြည့်ခြင်းကဘာလဲ။